समृद्धिको लर्को सामुदायिक च्याउ खेतीमार्फत उत्थानशीलता – नेपाल बाढी उत्थानशीलता पोर्टल
गृहपृष्ठ>ब्लग>समृद्धिको लर्को सामुदायिक च्याउ खेतीमार्फत उत्थानशीलता
बिहिवार, मे 21, 2020
चार वर्षअघि नुक्लीपुरका बासिन्दाहरूले बर्सेनि आउने बाढीको विनाशकारी प्रभावलाई कम गर्न एउटा सक्रिय उपायका रूपमा प्राक्टिकल एक्शनको प्राविधिक सहयोगमा सामूदायिक विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरे । गाउँलेहरूलाई आपत्कालीन समयमा खाना, राहत सामग्री र अन्य आवश्यक वस्तुहरू खरिद गर्नका लागि विपद् राहत कोषको आवश्यकता प¥यो । यसका लागि गाउँलेहरू आफैँले पैसा उठाउनु आवश्यक थियो । यद्यपि धेरैजसो गाउँलेहरू निकै गरिव भएकाले यो कोषका लागि सानो रकम समेत योगदान गर्न कठीन थियो ।
यसको समाधान खोज्ने क्रममा उनीहरूलाई सामुदायीक च्याउ खेतीबाट पैसा सङ्कलन गर्ने सुझावका साथै बाढी उत्थानशील कार्यक्रमले गाउँलेहरूलाई च्याउको बीउ, प्लास्टिकका झोला र उद्यम प्रारम्भ गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग पनि प्रदान ग¥यो । कामले तीब्रता लिए पछि आशा गरेभन्दा राम्रो परिणाम दियो । चार वर्षपछि गाउँलेहरूले रु. ८०,००० भन्दा बढीको च्याउ बिक्री गरेका छन् र दोस्रो पटक टिप्दा यो भन्दा बढी रकम कमाइ हुने आशा राखेका छन् । यसको फलस्वरूप विपद् राहत अभियानका लागि रकम जुटाउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको यो खेती उद्देश्य प्राप्त गर्न मात्र सफल नभई स्थानीय मानिसहरूलाई अरू कुरामा समेत लाभान्वित गराउन सफल भएको छ । प्रकोप राहत अभियानका लागि रकम जुटाउन सहयोग गर्नुको अलावा च्याउ खेतीबाट प्राप्त आम्दानी गरिव गाउँलेहरूका लागि बैङ्कजस्तै भएको छ ।
सबै सीडीएमसी सदस्यहरूले आवश्यक परेका बेला मल खरिद गर्न, स्कूलको मासिक शुल्क तिर्न वा अन्य आपत्कालीन परिस्थितिमा कोषबाट बिनाधितो न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण निकाल्न सक्दछन् । यसका लागि उनीहरूले सीडीएमसीमा निवेदन दिनुपर्छ । पहिले साठी प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य नुक्लीपुरका बासिन्दाहरूका लागि यो कोष ठूलो राहतको रूपमा आएको छ । वित्तीय संस्था र स्थानीय साहूमहाजनसँग चर्को ब्याजदरमा लिइएको ऋण तिर्न नसकेर धेरै गरिव गाउँलेहरूले घर, जग्गा र खेतबारी गुमाएका छन् । सीडीएमसीले न्यून ब्याजदरमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउँदा गाउँलेहरू त्यस्ता शोषणबाट जोगिन सफल भएका छन् ।
“पहिले आपत् पर्दा हामी साहूमहाजनको ढोका ढक्ढक्याउन जान्थ्यौँ र उनीहरूले दिएको ऋणको धेरै ब्याज तिर्नुपथ्र्याे तर अहिले त्यस्तो छैन” सीडीएमसीका अध्यक्ष श्यामकली थारुले उल्लेख गरिन् ।
श्यामकलीका अनुसार गाउँलेहरू खासगरी आपत्कालीन परिस्थितिमा ऋण लिन्छन् जसरी उनले पनि केही महिनाअघि उपचारका लागि लिएकी थिइन् । उपचारका लागि नेपालगञ्ज लैजान उनको परिवारसँग दुई हजार रूपैयाँ नभएकै कारण महिनौँसम्म श्यामकलीले पेटको गम्भीर पीडा भोग्नुप¥यो । तर सीडीएमसीको ऋण सुविधा सुरु हुने बित्तिकै उनले आफूलाई आवश्यक रकम ऋण लिई नेपालगञ्ज गएर डाक्टरलाई भेट्न सकिन् ।
“यदि म उपचारका लागि नगएकी भए स्थिति अझै जटिल हुन सक्थ्यो । च्याउ खेती मेरो लागि उद्धारकर्ता नै भयो” श्यामकली भन्छिन् जसले चौबीस प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋण तिरिसकेकी छिन् । यदि उनले स्थानीय साहूमहाजनबाट यो ऋण लिएकी भए सीडीएमसीको भन्दा तीन गुणा बढी ब्याज बुझाउनु पर्ने हुनसक्थ्यो ।
सीडीएमसीकी अर्की सदस्य मानकुमारी चौधरीले पनि आफ्ना छोराछोरीको मासिक शुल्क तिर्न ऋण लिएकी छिन् ।
“मलाई तुरुन्तै पैसा चाहिएको थियो तर कहाँबाट ल्याउने थाहा थिएन । म बिस्तारै किस्तामा ऋण फिर्ता गर्दैछु” उनले भनिन् जसको घरखर्च उनका सवारी चालक श्रीमानको कमाइले चल्दछ ।
सीडीएमसीका सदस्यका अनुसार करिब रु. ८०,००० ऋणका लागि प्रयोग भइरहेको छ । ऋण सीडीएमसी सदस्यहरूलाई मात्र दिइने र ऋण दिइने रकम न्यून भएकाले समितिले हालसम्म समस्या व्यहोर्नु परेको छैन । यसबाहेक सीडीएमसीले ब्याजबाट मात्रै रु. १०,००० बराबरको आम्दानी गरिसकेको छ ।
च्याउ खेतीका कारण नुक्लीपुरको प्रतिष्ठा बढ्दै गएको छ । यहाँ भएको सामुदायिक च्याउ खेतीको सफल प्रयोगले अन्य धेरै गाउँलेहरूलाई यो मोडेलको सिको गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । बाढीको जोखिम भएका अन्य क्षेत्रबाट पनि बढीभन्दा बढी सीडीएमसीहरू सामुदायिक च्याउ खेती व्यवसाय सुरु गर्ने प्रस्तावका साथ अग्रपर भैरहेका छन् । फस्टाएको च्याउ खेती बाढी उत्थानशील कार्यक्रमका धेरै गतिविधिहरूमध्ये एक हो । किसानहरूलाई तालिम प्रदान गर्न कृषक पाठशालाहरू पनि सन्चालनमा छ जसले उनीहरूलाई मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेती गर्न प्रोत्साहन गर्दछ ।
नेपालका पश्चिम र सुदूरपश्चिमका अधिकांश बस्तीहरूमा विपन्न वर्गका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ । उनीहरू शिक्षा र महत्वपूर्ण पूर्वाधारजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूबाट वञ्चित हुनुका साथै कर्णाली र बबई नदीको निकटताका कारण अक्सर बाढीको प्रकोपबाट समेत नराम्ररी प्रभावित हुन्छन् । सीपमा आधारित तालिम र समयमै दिइने सेवाले गाउँलेहरूको जीवनमा सुधार ल्याउनुका साथै उनीहरूमध्ये धेरैलाई गरिवीको रेखाभन्दा माथि उकास्न र विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेमा दुईमत छैन । वर्सेनि वर्षाको बाढीले निम्त्याउने विनाशले गर्दा जोखिम क्षेत्रका बासिन्दाहरू जोखिम न्यूनीकरणका लागि निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रबाट प्रभावकारी प्रयासहरू गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन् । उनीहरू केही हदसम्म आपत्कालीन परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न र परिस्थितिमा सुधार गर्न एवम् प्रकोपबाट हुने नीकरण गर्न सक्ने भएका छन् तर वर्तमान कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिन र भविष्यमा आउने विपद्ले निम्त्याउन सक्ने समस्याको उत्तम समाधानको विकास गर्न उनीहरूलाई अझै सहयोगको खाँचो छ ।